Otu esi etinye Atom Text Editor na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye Atom Text Editor na Ubuntu 20.04
Wednesday, September 8, 2021 by Jọshụa James
Bubata igodo GPG na ebe nchekwa Atọm
Wụnye Atom Text Editor
Mwepụta Atom Text Editor
Wepu Atom Text Editor
Akpaokwu nke Atom na-akpọ onwe ya bụ "onye na-edezi ederede a na-egwu egwu maka narị afọ nke 21st". Atọm, ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi, bụ enyi na enyi karịa, yana ọtụtụ nhọrọ maka mgbakwunye iji tinye nkọwa syntax maka asụsụ na usoro, tinye linting dị ike, na jikọta ndị debuggers, gburugburu oge ịgba ọsọ, na njikwa vidiyo na ihe ọkpụkpọ egwu, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi eme tinye ụdị Atom Text Editor kachasị ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị.
OS akwadoro: Ubuntu 20.04 - nhọrọ (Ubuntu 21.04)
Melite gi Ubuntu 20.04 sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị kwalitere ruo ugbu a:
Site na ndabara, Atom Text Editor adịghị na ebe nchekwa Ubuntu 20.04 ndabara. Iji wụnye Atom, ị ga-agbakwunyerịrị ebe nchekwa isi mmalite yana igodo GPG iji nyochaa ngwugwu. N'ụzọ dị mma, ibubata ebe nchekwa isi iyi ga-apụta na ị ga-enwe ụdị Atom kwụsiri ike kachasị ọhụrụ mgbe niile.
Mbụ, bubata ihe igodo GPG site na iwu a:
Mwepụta ihe atụ ma ọ bụrụ nke ọma:
Na-esote, bubata ebe nchekwa isi mmalite na ndepụta isi mmalite njikwa ngwugwu dabara adaba:
Iji hazie ebe nchekwa isi mmalite, ị ga-emerịrị ndepụta isi mmalite njikwa ngwugwu dabara adaba iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ tupu nrụnye Atom. Iji mee nke a, gbanye iwu a na njedebe gị:
Ugbu a tinye Atom Text Editor site na iji iwu a:
ụdị (NA), wee pịa (Tinye igodo) ịga n'ihu na nwụnye.
Na nrụnye zuru ezu, ị nwere ike ịgba ọsọ Atom n'ụzọ ole na ole. Nke mbụ, mgbe ịnọ na ọdụ gị, ịnwere ike iji iwu a:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ iwu atọm n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na desktọpụ Ubuntu gị mepee ụzọ: Ihe omume > Gosi ngwa > Atọm. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ ị mepee Atom Text Editor, ị ga-ahụ windo ndị a:
Ekele, ị tinyela Atom Text Editor na Ubuntu 20.04.
Iji wepu ngwanrọ Atom na sistemu Ubuntu gị, mee iwu na-esonụ na ọdụ gị:
Mgbe ahụ maka iwepụ kpamkpam, hichapụ ebe nchekwa na igodo GPG:
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi ebubata ebe nchekwa Atom wee wụnye ya site na iji njikwa ngwugwu dabara na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị. N'ozuzu, a na-ahụta Atom ka ọ dị mfe iji onye nchịkọta akụkọ WYSIWYG nke na-adị ngwa ngwa dị ka onye ọ bụla na-asọmpi dị ka Sublime Text editọ ma nwee ike ịhazi ya na plugins.
Maka ama ndi ọzọ, gaa na akwụkwọ akwụkwọ.
Categories Ubuntu Tags Atọm, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye TeamViewer na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye nchara na Debian 11